မေခမြစ်ပေါ်မှာ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ ချီဖွေရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်သံ)
စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက် ၂၀၀၉ခုနှစ်က ပထမအဆင့် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ မိုင်(၈၀)ခန့် ဝေးတဲ့ မေခမြစ်ကို ဖြတ်ပြီးဆောက်လုပ်နေတဲ့ ချီဖွေ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံတွေပါ...။
Myanmar Myitsone Chipwi power station dam Concrete pouring of the first warehouse opening September 18, 2009...
ချီဖွေရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား အဆိုပါစီမံကိန်းအား ၂၀၀၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ စတင်တည်ဆောက် နေသော်လည်း ထိုစဉ်က စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများမှာ ၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့မှာမှ စတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ(၂၂)ရက်နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ပွဲ ပြုလုပ်သယောင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်..။
Myanmar Myitsone Chipwi power station located in the upper reaches of the Irrawaddy in Myanmar ex Meikai Jiang tributary of the Pei River, China Gezhouba Group Corporation assume BDY-C-1 standard (dam tenders) construction task. Dam is concrete gravity dam crest elevation of 747.5 meters, the lowest river surface elevation of the base 700 meters maximum height of 47.5 m, 220 m long dam, dam crest width of5meters, the dam width of 47.5 meters. ဆည်ရဲ့ အမြင့်မီတာ 47.5 နဲ့ အကျယ် 220 မီတာ ရှိပါတယ်..။
၃၄၀၀ မီဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်မယ့် ချီဖွေရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြားဟာ တရုတ်ပြည် ယူနန်နယ်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်..။ လောလောဆယ် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ ပေးဆပ်မှု အရင်းအနှီးပမာဏ အင်မတန်မှ များပြားနေပါတယ်..။
February 1, 2011 မြင်ကွင်း...
(On) dam construction (the left) on the right bank slope protection, construction (bottom right) Reservoir near dam Slope Excavation
The project is located in Kachin State in northern Burma near the city of their training, the upper reaches of the Irrawaddy River tributary of the training ex Meikai Jiang River (Chipwi Hka) intersection region is over the Irrawaddy River basin near Myitkyina development project - and the training station Myitsone construction of power. Diversion-type hydroelectric power plant to the project by the dam, power plant water systems and power stations and other components. Dam normal water level 740 m, maximum height of 47.5 m, average annual flow of 40.1 m dam / sec, power plant installed capacity of 99 MW. Dam on the river in their training, their training from the town about 12km; powerhouse in the ex Meikai Jiang left bank, upstream from the town of their training and about9km downstream from the station about 62 km Myitsone from the upper reaches of the training station about 20 km.
ဒီပုံတွေကတော့ ချီဖွေနဲ့ ချီဖွေငယ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (၂ခု)မှ ပြီးစီးသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ ချီဖွေ(ငယ်) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်...။ တရုတ်နိုင်ငံမှ China Power Investment Coporation (CPI)နဲ့ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်..
Myanmar River upstream of the Iraqi power (Chipwy Nge) power plant monitoring system on-site installation and commissioning H9000 progress.
River power station by CPI International Power Investment Co., Ltd. Yunnan development and construction, isanext step for the development and construction of power plant, located in Kachin State in northern Burma near the city of their training, power plant installed capacity of3× 33MW, multi-year average annual generation the amount of 609 million kW · h, usingavoltage of 110kV access system, the main wiring for dual-bus connection, qualifying for the3back (includingareturn to standby). Power station by "unattended" (few people on duty) design, the use of water technology companies H9000 V4.0 computer monitoring system.
Local militants also called Dam risks with the Myanmar government and the Chinese government repeated representations。
June 13, 2010 on the issue started to build four sets of6million KW, designed annual generating capacity of 1.07 billion kwh, the estimated total investment of 1.7 billion, more than 90% of electricity into the China Southern Power Grid.
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ မြီရှင်ထံမှ အကြွေးယူထားတဲ့ မိဘများမှ အကြွေးပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ အတွက် သမီးဖြစ်ဖြစ်သူကို မြီရှင်အား ဝကွက် ထိုးအပ်လိုက်ရသကဲ့သို့ အမိဧရာဝတီမြစ်ကြီးအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဝကွက်အပ်တော့မည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေပါတယ်..။
ဒီရုပ်သံဖိုင်ကတော့ ၂၀၁၀ဇူလိုင်လက KNG ကရိုက်ကူးထားတဲ့ မေခမြစ်ပေါ်က ချီဖွေ ရေကာတာစီမံကိန်း ရုပ်သံဖိုင်ပါ..
ပြည်တွင်းမှ ရုပ်သံဖိုင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် http://www.mediafire.com/?pc5bw8frbhm278m
ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိတဲ့ စီမံကိန်း သတင်း၊ ဓာတ်ပုံများ ဆက်လက် ရေးသားဖော်ပြပါမည်...
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 5:41 AM